Abafundisi ntsapho abonqenayo. – HLAB'UKHANGELE
Posted on May 24, 2017 May 26, 2017 by isixhosaulwimilwenkobe
Abafundisi ntsapho abonqenayo.
Ibhalwe ngu Nwabisa Tisani
Abafundi abaninzi kumabanga aphakamileyo kwizikolo zikaRhulumenete bayazifundisa ngenxa yokonqena kwabafundisi ntsapho. Kukho abafundi abaqhubayo iveki zilandelelane bengenaye umntu obafundisa isifundo esithile. Lonto iye ibe negalelo kwiziphuma zokuphela konyaka ngakumbi kwabo benza ibanga leshumi. Ndiye ndathetha nabafundi abaliqela besikolo iNtsika Secondary ndafumanisa ukuba bayakhalaza ngokungabikho komfundisi ntsapho othile. Aba bafundi abafunanga ukunikezela ngamagama abo.
Umfundi wokuqala uthe “kukho utitshala oneveki ezimbini engasayi esikolweni kodwa ubashiye nomsebenzi kwaye neemviwo zokuphela konyaka zisondele”. Lento ibonakalisa ukungazinikezeli kubafundisi ntsapho emsebenzini wabo. Andikwazanga ukufumana inqununu yaseNtsika ikhe iphefumle kulomba wokuba abafundi bagqibe iveki ezimbini bengenaye umfindisi ntsapho. Ayikhange iphelele apho incoko endibenayo nabafundi kukho umfundi uvelise into yokuba nokuba sele bekhona abafundisi ntsapho abanye babo bafika bahlale kwigumbi lokufunda bajonge konomyayi babo bayalele abafundi ukuba mabazifundele kwikhasi elithile encwadini. Lomfundi uye wathi xa ephefumla kulomba “nokuba utitshala akekho akenzi mehluko kuba naxa ekhona akasifundisi nto, izinto ezininzi zizinto esizifundeleyo”.
Emva kokufumana lengxelo ndiye ndazama ukuthetha nesebe lezemfundo kuba kukho amarhe okuba iPGCE (Post Grad Certificate in Education) ingapheliswa ngenxa yabantu abangena kuye ngenjongo jokuwela kwezemfundo xa bengamfumani umsebenzi kwezinye iindawo. Kodwa andifumenanga mntu ndinokuthi ndithethe nayo.
Previous PostPrevious Ukugqabhuka kwemibhobho yamagumbi angasese kwisikolo Mretyana
Next PostNext Babes wodumo: “khange ndidinge isiNgesi ukuze ndityunjwelwe imbasa zomculo zaze Melika i-BET”